musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Awards » Iyo yazvino Tourism Hero inoita Senegal Proud
African Tourism Bhodhi • Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Senegal Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Wtn
Mubairo weHurumende weHeroes wakatangwa neWorld Tourism Network, hunyanzvi hwevashandi vekushanya munyika zana nemakumi masere nesere. WTN yakatanga kuvaka zvakare. Kufamba munaKurume wa128 muBerlin, Germany.
Mubairo uyu hauna kubva pamari yekusimudzira. Iyo inogara iri yemahara uye inofanirwa kucherechedza vanhu vanoenda padanho rekuwedzera kune zvakanakira World Tourism Indasitiri, Dr. Deme Mouhamed Faouzou ikozvino mumwe wavo, uye wekutanga Tourism Gamba kubva kuWest Africa.
Mr. Deme Mouhamed Faouzou ndiye chipangamazano we Ministry of Tourism neAir Transport muSenegal, uye ikozvino yazvino Tourism Gamba neWorld Tourism Network.
Iyo Horo yeInternational Tourism Magamba yakavhurwa nekusarudzwa chete kuziva avo vakaratidza hunoshamisa hutungamiriri, hunyanzvi, uye zviito. Tourism Magamba anoenda padanho rekuwedzera. Iko hakuna mari kwese.
Iye akati: Ini ndinonzwisisa kukosha uye mutoro werombo rino rakakonzerwa nehunhu hukuru hwekushanya kwenyika uye ndinoda kuvimbisa rutsigiro rwangu nekudzokororazve kuyedza muhuwandu uye mhando yekusimudzirwa kwekushanya kweAfrica post-COVID-19.
Mr. Deme Mouhamed Faouzou akasarudzwa naJosef Kafunda kuNamibia pakati pevamwe kuti ave Gamba Razvino Rokushanya na World Tourism Network.
Ndiye wekutanga kupa mubayiro muSenegal, wechi9 muAfrica, uye wechi25 pasirese, uye gamba rechina gore rino (4) pasi rese.
Iye akati: Ndatamiswa, hongu!
Pachikumbiro chaVaJoseph Kafunda vanobva kuNamibia, mutambi mukuru uye nyanzvi yekushanya nemutsa akatsigira nhoroondo yangu yekusarudzwa kwevachakwikwidza pachinzvimbo cheMagamba Ekushanya.
Nditendere ndimubhadhare mutero uye kutenda komiti yekusarudza iyo yaunotungamira nekuve nekudzidza uye kubvuma kundipa zita rine mukurumbira reHero reZvakashanya.
Kusarudzwa uku kunouya gore rimwe chete mushure mekunge komiti yepamusoro yekushanya kweAfrica yandipa rukudzo rwekusimudza pachinzvimbo cheMumiriri weAfrican Tourism.
Uku kuzvitsaurira, tinotya kutaura, zvibereko zvemakore makumi matatu ezviitiko uye kushanda nesimba kuti tiite mupiro wedu mushoma mukusimudzira kushanya kweAfrica, pasirese uye kunyanya iyo yeSenegal, nyika yangu iyo yakandipa zvese.
Rukudzo rwakapihwa kwandiri svondo rino kuti ndisarudzwe nedare ra2021 Pyne Awards kuti ndipe kune vateereri mukundi wekambani yepamusorosoro yeAfrica panguva yemhemberero yepamutemo pamberi peMakurukota neMamishinari uye neDiaspora.
Ini ndinonzwisisa kukosha uye mutoro werombo rino rakakonzerwa nehunhu hukuru hwekushanya kwenyika uye ndinoda kuvimbisa rutsigiro rwangu nekudzokororazve kuyedza muhuwandu uye mhando yekusimudzirwa kweAfrican Tourism post-Covid 19
Mr. Deme Mouhamed Faouzou
Tourism Gamba muDakar, Senegal
VaDeme Mouhamed Faouzou vakabatsira kana zvasvika ku Tourism Investment muSenegal nekunze.
Iye ndiye chipangamazano we Ministry of Tourism uye Yekutakura Mhepo muSenegal.
Iye anozivikanwa kutaura asingatyi kana zvasvika kune zvekushanya uye mashandiro anofanirwa kushanda.
Iye inyanzvi mukushanya, kugamuchira vaeni, uye Civil Aviation chikamu. Chiitiko chake zvese mumasangano akazvimirira uye mukutungamira kweruzhinji chimwe chinhu chatisingawane muvatungamiriri vazhinji
Anofarira zvekushanya, kusimudzira kwayo uye ane chishuwo chakasimba kwazvo chekurwira nyika dzisina kusimukira kuti dziwane mukana wekudyara kuburikidza nekushanya,
Iye munhu anounza hunhu hwekuremekedza, kugovana, kubatana, uye nemisimboti ye 'kuvhurika uye kugadzira hupfumi.
Mr. Faouzou inhengo ye World Tourism Network.
Mr. Faouou vakati:
Ini ndiri mutambi wehunyanzvi akapedza kudzidza kubva mukushanya, kugamuchira vaeni, uye Civil Aviation chikamu, aine makore akati wandei eruzivo munzvimbo dzakazvimirira uye muhutongi hweveruzhinji.
Ini ndinofarira zvekushanya, ini ndinoda kukura kwayo uye ndine chishuwo chakasimba kwazvo chekuona nyika dzisina kusimukira 'mukana wekubuda kubudikidza nekushanya, iyo inosanganisira tsika dzekuremekedza, kugovana, kubatana, uye nemisimboti ye' kuvhurika nekusika kwehupfumi .
Ndiri mudzidzisi paUniversity Tourism nyanzvi technical Advisor kune Gurukota rezveKushanya uye Kutakura Kwemhepo muSenegal.
Ndiri director agency yekufambisa, maneja wehotera, mutauri, murairidzi, Senior Consultant, uye Mutungamiriri weNational Observatory yeDevelopment of Tourism muSenegal
Ndiri nhengo uye Mumiriri weSenegal kuAfrica Association of Hospitality Professionals (AAHP), Mumiriri weAfrican Tourism Committee anomiririra Africa inotaura chiFrench.
Ndiri mumiriri we African Tourism Bhodhi.
Ini ndiri zvakare munyori wemabhuku akati wandei, kusanganisira maSenegal mafambiro ekushanya uye zviitiko.
Ini ndaive mukwikwidzi kuna Secretary-General weWorld Tourism Organisation - UNWTO.
Ini ndakagamuchira iyo 2017 Knight yeNational Order yeMerit yeRepublic yeSenegal.
Mr. Faouzou ari muKambani. Sangana nematanhatu ekushanyirwa Magamba pano.
WTN Sachigaro Juergen Steinmetz akati:
“Tinodada nekuremekedza Deme Mouhamed kuti ave gamba rekutanga mu Tourism muWest Africa. Anga achishanda asinganeti kupa nyika yake Senegal kuzivikanwa mune yekufamba uye yekushanya ndima kuburikidza nedambudziko razvino. Zvinotora vanhu vemuono wake, simba, uye simba kutungamira. Makorokoto! ”
Uganda Hydro Dams: Nyowani Yekushanya Inosvika
Clinical kuyedzwa kwepiritsi vhezheni yevhaVO-19 wekudzivirira ...
2021 Caribbean Tourism: Gut Chibhakera
Diana McIntyre-Pike anoti:
Nyamavhuvhu 24, 2021 pa07: 26
Makorokoto Deme Mohamed nekujoinha yedu WTN Yepasi Pose Tourism Tourism Magamba Mhuri iyo ini ndakave nerukudzo kuverengerwa mu2020 uye ndinotarisira kubatana newe munguva pfupi.